Ikhosi yeTopography kunye nesitishi esipheleleyo-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Inkambo yezobugcisa kunye nesitishi esipheleleyo
AutoCAD-AutoDeskGPS / IzixhoboTopography
Namhlanje siqala iqela esinethemba lokuthatha oomasipala base-cadastre boomasipala kunye namancomunidades ukuzalisa uqeqesho lwabo, okwangoku ngoku ngenxa yezizathu eziphambili ziye zaphela nje kuphela. Injongo kukuba banokubonelela ngeenkonzo zabo ukuze bafumane ulwazi oluyimfuneko ekwakheni iiprojekthi zeziseko.
Le khosi inzima kakhulu kwiintsuku ezintathu, ngeveki ezibandakanya ukuzibingelela zombini injini efaka isihloko kunye nabathathi-nxaxheba be-25 abaye baye emakhaya abo ukuba baye kulo mcimbi. Njengalolu suku siya kwenza eminye imicimbi emibini, kuba okukuqala kuhlose abo sele besetyenzisile isitishi esipheleleyo phantsi kweendlela zesigodastra, nangona baye batyhila abambalwa abasebenzisa i -ododite yesiqhelo.
Amava angaphezu kokuthakazelisa, ekudlulileyo kuya kubonisa ukuba imifanekiso entsha Sokkia 630 RX, esele ifike nge-laser plummet kunye nesoxhobo sokukhuphela idatha ye-USB kunye namakhadi e-SD. Siza kubona izinto ezithakazelisayo kumxube weenjineli zeenzululwazi ezinamava, ootitshala bee-cadastre ezide kunye nabafundi abanomxholo othembisayo ukuba bazimisele ngokufunda umsebenzi weyunivesithi kwimeko yokuphuhlisa ummandla.
Emva kweenyanga ezintandathu kulungile ukubona bonke abantu abenza iqela lam, badibene endaweni enye, baxelele okuthile kwamava abo kwaye bahlambulule ubuqili obangela umgama kwiintsebenziswano kunye nomona onobugcisa. Usizi lokuba unyaka ozayo ndiya kufuneka ndiyinqumle eli qela.
Ukubuyela kwikhosi, ngosuku lokuqala, kusasa kwakukho ukuhlaziywa kwintsimi ukubonisa ukuba izitishi ezipheleleyo ezafika kumcimbi zisesimweni, kwaye ukuba abathathi-nxaxheba bafumana ingxelo malunga nokusetyenziswa kwezixhobo. Ngemva kwemva ihlanganisa isihloko esithintekayo kwiziseko zophuhliso, ukubaluleka kwayo kumntu ukusebenzisana nendalo kwintlalo eqhubekayo kunye nemiba ephambili efunekayo abaphandi; ngokuyisiseko kwiindlela, iindlela zokuhambisa amanzi kunye namanzi okusela.
Emva koko ngomhla wesibini, ngoMgqibelo kuya kuba nenkqubo yasemaphandleni ukuphakamisa icandelo lendlela kwaye ngosuku lwesithathu umgca wokuqhuba. Njengesixhobo sokumakisha, siya kusetyenziswa IMapper Global Ngeenjongo zesampuli zokukhanya, kunye ne-CAD yezoLuntu Ngosuku lwesithathu, nangona kuphela kwinqanaba leendandatho. Emva kwexesha, i-mancomunidades iya kuba nakho ukugcina imali eninzi, edlalwa ngolwazi lokuqala kunye nomlingani Ukuqulunqwa kweeprojekti zeeprojekthi kunye nee-arhente ezibambiseneyo kulo mongo. Kananjalo nolwazi oluqokelelwe kulolu hambo luya kwenza lo mthombo uvule ingqondo yakho kumathuba anokuthi avule ubomi kuphela. Indawo: Indawo ethile ilahlekile -akunjalo- ukusuka eHonduras.
Enyanisweni, ekugqibeleni ndakwazi ukulahla i-laptop kwaye ndilawula kuphela Blogsy
Genius kunye nobuchule
UFernando Guasco Devereux uthi:
Uya kuphuhlisa njani le khosi ye-2017
Daniel Alarcpon uthi:
Mholweni ndinomdla kule khosi, iya kuba ngo-2017 apho iya kufundiswa kwakhona
apho, iishedyuli, imixholo kunye neendleko.
Eli nqaku lithetha ngokuphuhliswa kweli khosi kwi-2011
Molo molo Ndifuna ukwazi malunga ekuhambeni kwexesha TOPOGRAFIA, indleko, yaye ekugqibeleni mna ndikho kade OYINGCALI inokwenziwa Enkosi Mercantile
indlela eninzi ngayo iphopographicini njani ukugcinwa kwesikhokelo esiphezulu seqela sokkia kubeka i-630
oswaldo galarza lerma uthi:
Kuthekani ukuba umntu onolwazi mphandle kwaye ufuna into kwakhona babelane ngezimvo Mna umfundi kwisikolo sokufundela of ukuhlola lobunjineli kunye ukuhlola ye yasezintabeni kwiyunivesithi yesizwe ibekwe kummandla Puno yelizwe Peru le imeyili yami galeos_waldo@hotmail.com ndishiye umyalezo
ahhhh… kwaye ngendlela i-630 RX ayifuni ukuba ilwe nentambo yokudlulisa ... ethi ngamanye amaxesha ikubone ngamanye amaxesha ingabi njalo.
Olu hlobo lunye uphuhliso
lunomdla.wusuku lokuba ngendlela ayengayiboni ibhola